Serasera.org - Blog: août 2008
Publié par Eugene Heriniaina à 8/10/2008 02:02:00 PM 6 commentaires:
Mandalo fanamboarana ny serasera
Mandalo fanamboarana ny lohamilina iray an'ny serasera amin'izao fotoana izao.
Tapaka naharitra izy omaly ka mila nosoloina mihitsy ilay lohamilina. Ny olana fotsiny dia tsy miasa weekend ilay mpivarotra lohamilina ka tsy haiko na homen'izy ireo ihany ny milina vaovao.
Takelaka vitsivitsy ihany no voakasik'ity fanamboarana ity.
Ny takelaka hafa dia mbola mandeha:
Raha vao ity takelaka ity no misokatra dia tsy mandeha izany ny takelaka nosokafanao.
Publié par Eugene Heriniaina à 8/09/2008 09:20:00 AM Aucun commentaire: